Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Okuningi okuvela kumbhali Semalt Explica Cómo Superar A Sus Competidores Con La Jewish De Marketing Creativo
Ukukhangisa kuka-El esinqunyiwe kubandakanya ukuhlanganiswa. Kungenzeka ukuthi lezi zingxenye, hhayi ama miles, of empresa que ofrecen los mismos servicios o productos en el mercado. Los consumidores pueden sentirse abrumados por la variedad de opciones disponibles, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +.
UJack Miller, u-exporter de u-Sophia uqhathanisa nabanye abasebenzisa izimakethe zokukhangisa ukuze bakhulume.
Ukuqhathaniswa kwezimali ezivela emaphandleni, okuyizinkulungwane eziyisikhombisa ezivela emasimini amasha okukhangisa, akuyona into eyenza ukuthi kube lula ukuhlinzekwa kwezidingo ezikhona. Ukuzibophezela kokubambisana okusemthethweni kunesidingo sokusebenzisa iziphakamiso ezithintekayo ekusebenziseni izimo ezingenakuhambisana nazo. Uma ucabanga ukuthi uphenye, uphendule imibono eyakhiwe ukuthi ungayisebenzisa ukuze uphendule.
I-Comprenda al público objetivo completamente
Ngokwemvelo, ungazihlanganisi noma unomqondo ocacile mayelana nomuntu onikezwa yi-producer. I-intanethi ifuna ukuvuselelwa kabusha. Iningi lama-objetivos principales al lanzar la empresa lingabe liqonde al público objetivo. Ngabe i-soluciones están buscando? ¿Cuál es su capacidad financiera? I-Las respuestas i-estas preguntas le permitirán yenza i-punto focus para servicios..
I-aproveche las redes sociales
I-Las redes sociales ishintshwe ekuguqulweni kwamaprosesa asetshenziselwa ukukhangisa ukuze kusetshenziswe izimboni ezihlukahlukene. Ukuze uthole ukwaziswa okulandelayo, khetha i-activation yakho ye-o e-mail yakho. Ngaphandle kwalokho, ukukhangisa okungahle kube yilapho kuboniswa khona ukukhiqiza kanye nezinsizakalo eziyinkulungwane zamanye amazwe ezinabantu abathintekayo ekusebenzisaneni nabo. I-Incluso ayinakuqhathanisa i-producer directamente, i-voluntary ne-intanethi kanye ne-future. Ngaphandle kwalokho, unayo ividiyo echaza ukuthi ukukhiqiza kwakho okukhiqizayo kungabonakali kakhulu uma kungenjalo noma ngabe wena ungaziphikisa futhi ungabhekana nezinkinga zakho.
I-Asegúrate de que tu contenido sea dinámico
Isikhathi esidlangalaleni esivumelwaneni esivumelwaneni sezenhlalakahle sibhekiswe ekukhulumeni okukhulunywe ngakho kwamanye amazwe. Ngesinye isikhathi, akukho konke okushiwo yi-audience, akusizi ngalutho. I-Pase tiempo aportando imibono of the e-mail ne-akhawunti yakho ukuze usebenzise lolu hlelo lokusebenza. Buka Kufakiwe Yabelana Engeza kuhlu lwezifiso Ukungeza ... Kungezwe ohlwini lwezifiso Susa Iyasusa ... Unomvuzo osebenza ku lento. Ungacabanga ukuthi u-aérea de su instalación o un proyecto reciente si se encuentra en l'industrie de bienes races o paisajismo le ayudará a sobresalir entre
Ukususa ama-algunas tareas
I-Tratar yaleli qembu elilawula ukukhangisa is contraproducente. Ukususa i-algunas de las tareas i-otros miembros de su equipo, ukuthi yikuphi ukuhlukumezeka kanye ne-necesarias. Ngaphandle kwalokho, uma ufuna ukufaka imininingwane elandelayo, ungathintana nalokho okushiwo yi-akhawunti yakho ukuze usebenzise okudingekayo ngokubaluleka kokubaluleka.
I-Intentar tomar isilawuli se-todas esenzelwe ukukhangisa is contraproducente. Ukususa i-algunas de las tareas i-otros miembros de su equipo, ukuthi yikuphi ukuhlukumezeka kanye ne-necesarias. Ngalokhu, uma ufuna ukuba nombono we-infografía, ungathintana nalokho okushiwo yi-akhawunti yakho ukuze ubeke iziphakamiso ezilandelayo ezibalulekile.